မိုးနံ့သင်းသင်းလေးကပေးတဲ့ ကျန်းမာရေး - Hello Sayarwon
လူ တော်တော်များများက မိုးစက် မိုးပေါက်လေးတွေ ကျနေတဲ့ အသံကို သဘောကျ ကြပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ မိုးရာသီရဲ့ သံစဉ်လေးတွေက စိတ်ကို လန်းဆန်း စေလို့ပါ။ ဒါတင်လား ဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ မိုးရာသီမှာ ခပ်သင်းသင်းလေး လွင့်ပျံနေတတ်တဲ့ မိုးနံ့ သင်းသင်းလေး ကလည်း ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူ ပြုပေးပါသေးတယ်။
မိုးနံ့ သင်းသင်းလေး နဲ့ မိုးစက်မိုးပေါက်လေးတွေက ဦးနှောက်ရဲ့ ခံစားမှု အပိုင်းကိုရော မှတ်ဉာဏ် ထိန်းသိမ်းမှု အပိုင်းကိုပါ ကောင်းကျိုးတွေ ပေးပါတယ်။
မိုးရွာချလိုက်တဲ့အခါ ထွက်လာတဲ့ မိုးနံ့ သင်းသင်းလေးနဲ့ မိုးရေစက်လေးတွေက ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လို အထောက်အကူ ပြုလဲဆိုတာကို လေ့လာထားတဲ့ တွေ့ရှိချက်လေးတွေ အကြောင်း ပြောပြပေး သွားပါမယ်။
ရွာချလိုက်တဲ့ မိုးစက် မိုးပေါက်လေးတွေ နဲ့ မိုးနံ့ သင်းသင်းလေးတွေက
လေထုတွေက ခြောက်သွေ့တဲ့ ရာသီကာလ မှာဆိုရင် ဖုန်မှုန့်တွေ၊ မီးခိုးငွေ့တွေကြောင့် ညစ်ညမ်း နေနိုင်ပါတယ်။ မိုးရာသီ မှာတော့ ဒီလို မဟုတ်ဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်က အေးမြ နေသလို လေထု ကလည်း လတ်ဆတ်လို့ နေပါတယ်။
မိုးရာသီရဲ့ ရနံ့လေးက စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ပြေလျော့ စေနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ခံစားမှု ကောင်းစေဖို့လည်း အကောင်းဆုံး အထောက်အပံ့ ပေးနိုင်ပါတယ်။
မိုးစက် မိုးပေါက်လေးတွေ နဲ့ မိုးနံ့ သင်းသင်းလေးက ဆင်ခြင် တွေးတောနိုင်စွမ်း နဲ့ နားလည်နိုင်စွမ်းကို တိုးတက်စေပြီး ပြဿနာတွေကို ကောင်းကောင်း ဖြေရှင်းနိုင်စေသလို ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေကို တည်ဆောက်နိုင်စေဖို့ အကောင်းဆုံး အထောက်အပံ့ ပေးနိုင်ပါတယ်။
မိုးကာလမှာ လေထုက လတ်ဆတ်သလို အစိုဓာတ် ပါဝင်မှုကလည်း များပါတယ်။ ဒီလို အစိုဓာတ် ပါဝင်နေမှုကပဲ အသားအရေကို အစိုဓာတ် ထိန်းပေးပြီး ခြောက်သွေ့မှု ကင်းစေလို့ အရေပြား ကျန်းမာစေမှာပါ။
လေထုထဲမှာ ပါတဲ့ အရေပြားကို ထိခိုက် စေနိုင်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို အကောင်းဆုံး ဖယ်ရှား ပေးနိုင်ပါတယ်။
မိုးရာသီရဲ့ အေးမြမှု နဲ့ မိုးနံ့ သင်းသင်းလေးက စိတ်ခံစားမှုကို ကောင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ပြဿနာ ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းကို ကောင်းစေသလို စိတ်ကို ကြည်လင် စေနိုင်ပါတယ်။
ပူပြင်းတဲ့ ကာလတွေမှာ လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်ဖြစ်၊ ဟိုနား ဒီနား သွားတဲ့အခါ လမ်းမလျှောက် ဖြစ်ပေမယ့် မိုးကာလမှာ ရာသီဥတုက အေးတာကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်း ပိုလုပ် ဖြစ်နိုင်သလို အနီးအနား သွားစရာကို လမ်းလျှောက် သွားတာ​ကြောင့် ကယ်လ်လိုရီ ပိုမို လောင်ကျွမ်း စေနိုင်ပါတယ်။
ကဲ..မိုးရာသီက စိုစိုစွတ်စွတ် ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး စိတ်ညစ်မနေပါနဲ့။ အခုလို အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေ ပေးတယ် ဆိုတာကိုလည်း သတိ ပြုစေချင်ပါတယ်။
The Scent Of Rain Reduces Stress Levels And Helps You Relax, Among Other7Benefits https://trendings.net/the-scent-of-rain-reduces-stress-levels-and-helps-you-relax-among-other-7-benefits/j3l2k0x7 Accessed Date 19 July 2020
What Makes Rain Smell So Good? https://www.smithsonianmag.com/science-nature/what-makes-rain-smell-so-good-13806085/ Accessed Date 19 July 2020
Why Does Rain Smell Good? https://www.livescience.com/37648-good-smells-rain-petrichor.html Accessed Date 19 July 2020
The Smell Of Rain Can Reduce Stress And Walking In The Rain Has These5Benefits https://educatedbox.com/the-smell-of-rain-can-reduce-stress-and-walking-in-the-rain-has-these-5-benefits/ Accessed Date 19 July 2020
The Smell Of The Rain Reduces Stress And7Other Benefits Of Walking In The Rain https://medium.com/@darkfae/the-smell-of-the-rain-reduces-stress-and-7-other-benefits-of-walking-in-the-rain-a7c34cd1624 Accessed Date 19 July 2020